Baarlamaanka oo maanta codka kalsoonida u qaadaya Wasiir Xoosh – Balcad.com Teyteyleey
Golaha Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta la filayaa inuu codka kalsoonida u qaado Wasiirka Wasaaradda Dastuurka iyo arrimaha federaalka C/raxmaan Xoosh Jibriil oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ee wadanka Kenya.
Dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xalay ka socday magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku lug yeeshay xukuumadda Federaalka, iyadoo xildhibaanada Baarlamaanka iyo Wasiiro ka tirsan dowladda ay kulamo kala duwan ka yeelanayeen kalsooni kala noqoshada Wasiirka Dastuurka.
Wararka ayaa sheegaya in laba garab oo siyaasadeed ay u qeybsan yihiin dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed kuwaasi oo iyagu u ololeynaya inaan xilka laga qaadin Wasiir Xoosh, halka kuwo kalena ay doonayaan inay ridaan Wasiirka.
Dhinaca kale Wasiirka Dastuurka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu xiisad ka dhex kiciyay Hay’adaha Dowladda iyo Baarlamaanka, iyadoo xildhibaanada kahorjeeda Wasiirka ay ku eedeynayaan inuu meel ka dhac ku sameeyay Baarlamaanka.
The post Baarlamaanka oo maanta codka kalsoonida u qaadaya Wasiir Xoosh appeared first on Ilwareed Online.